merolagani - कस्तो छ सोमबार सार्वजनिक हुने निशान म्याग्नाइट ?
कस्तो छ सोमबार सार्वजनिक हुने निशान म्याग्नाइट ?
Feb 20, 2021 02:24 PM Merolagani
आगामी फागुन १० गते नेपाली बजारमा निशान म्याग्नाइट सार्वजनिक हुँदै छ । नेपालका लागी निशान गाडीको आधिकारीक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले नेपाली बजार मूल्य सहित सार्वजनिक गर्दै छ ।
एसयुभीको नयाँ अनुभूति लिन सकिने यो गाडी फरक विशेषता सहित नेपाली बजारमा आउँने भएको हो ।
पायोनियर मोटोकर्प प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीपकुमार शारदाले निसान गाडीको नेपाली बजार र मूल्यवान ग्राहकहरुप्रतिको प्रतिवद्धताको प्रतिक नै नयाँ निसान म्याग्नाइटको लन्च हुने बताए ।
बिग, बोल्ड, आकर्षक र करिश्म्याटिक एसयूभी विशेष आकर्षक मूल्यमा आउने र धेरै लामो समयदेखी प्रतिक्षारत ग्राहकहरुका लागि अन्य थुप्रै अफरहरुका साथ आउने बताइएको छ ।
निशानले आफ्नो उत्पादकत्वको विकास गर्दै मेक इन इण्डिया, मेक फर द वलर््ड एसयूभीलाई विश्व बजारमा पुर्याउने क्रममा नेपाल पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार बनेको कम्पनीको भनाई छ ।
२०२० एक महत्वपूर्ण वर्षको रूपमा लिइएकाले भारतको बजारमा प्राप्त प्रतिक्रिया र सफलतालाई नेपाली बजारमा पनि दोहोर्याउने निशानको उद्देश्य तथा चहाना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
निशान मोटर भारतका अध्यक्ष तथा दक्षिण एशिया बजारका इन्चार्ज सिनन ओजकोकका अनुसार नयाँ निशान म्यागनाइट विश्व बजारको लागि भारतमा निर्मित गाडि हो ।
कस्तो छ गाडी ?
निशान म्याग्नाइट फरक बिशेषताका साथ नेपाली बजारमा भित्रिने छ । जसमा सीएमएफ ए प्लस प्लाटफममा आउने यो लोभलाग्दो डिजाइन, जुन अगाडीको भागले थप आकर्षित गर्छ । बी प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, एलइडी लाईट र आई सेप्ट एलइड फग ल्यापले अगाडीको भागलाई अकर्षक बनाएको छ ।
पछाडीको भाड कालो र रातो मिक्सले गाडीमा ध्यान खिच्न अझ मद्दत पुग्छ । यो गाडीले फोर्ड इकोस्पोट, मारुती सुजुकी, हुन्डाइ भेन्यु लगाएत गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । खासगरी यो गाडीमा ककपिट इन्टरफेस डिजाइन, एबिएस फिचर, भिडिसी, ड्यूल फ्रन्ड एयर व्याग, २०५ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ ।
निसान म्यागनाइटमा १.० लिटर पेट्रोल इन्जिनको दुईवटा भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । जसमा एउटा नेचुरली एस्पायर र अर्काे टर्बाेचार्ज्ड इन्जिन हुनेछ । ९९९ सिसि क्षमताको यो गाडीले ७१ बीपिएचमा ६२५० आरपीएम पावर जेनेरेट गर्छ ।
पाँच स्पिड म्यान्युयल गियर दिइएको छ भने ३३६ लिटर इन्धन क्षमता, प्रतिलिटर १८.७५ किलोमिटर माइलेज र पाँच सिटर क्षमता जस्ता फिचर यो गाडीमा रहेको छ । नेपाली बजारमा यो गाडी ओन्याक्स व्ल्याक, स्ट्रोम सेता, ब्राउन, सिल्भर लगाएतको कलरमा उपलब्ध हुँने छ । यो गाडी ११ भेरियन्टमा नेपाली बजारमा आएको छ । जसको मुल्य २९ लाख ४९ हजार देखि ४२ लाख ७९ हजार सम्म पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तो छ मूल्य सूची
संस्थापक डुब्ने भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो, तर जनता ८० प्रतिशत डुब्ने खतरा हुन्छः सतिशकुमार माेर
Mar 05, 2021 05:41 PM
नेपाल उद्याेग परिसंघले आत्म निर्भर अर्थतन्त्रकाे लागि मेक इन नेपाल अभियान शुरू गरेकाे छ । काेभिडकाे असर पछि मुलुक अझ बढी आत्म निर्भर बन्नु पर्ने देखेरै परिसंघले याे अभियान संचालन गर्ने तयारी गरेकाे जनाएकाे छ । याे अभियानले देश विकासका लागि सराेकारवालाहरूकाे साेच नै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याएकाे छ ।
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा पाँच घण्टामा झण्डै डेढ लाखले दिए आवेदन
Mar 05, 2021 05:31 PM
नेपालमै मोबाइलको एसेम्बल गर्ने तयारी,दूरसञ्चार प्राधिकरणले थाल्यो अध्ययन
Mar 05, 2021 03:50 PM
Mar 05, 2021 01:17 PM
एनआईबिएल एस क्यापिटलकाे नि:शुल्क घरदैलो डिम्याट खाता अभियान ललितपुरको घुसेलमा
Mar 05, 2021 01:10 PM
शेयर बजारमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी आधा खर्ब माथि, कुनको कति?